10 zvinhu zvaunofanira kuziva usati watora DMAA | AASraw
/Blog/garari/ 10 zvinhu zvaunofanira kuziva musati watora DMAA
Posted on 11 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
DMAA inogadzirwa nemishonga inobatanidza iyo inobatsira mukuvaka muviri, kupisa kwemafuta emumuviri uye nekuvandudzika kwechinguva chiduku chekuyeuka nekuita kwakasimba. Ichi chinyorwa chinosanganisira DMAA mibairo yezviyero pamwe nemigumisiro yemigumisiro ye1,3-dimethylamylamine.
Understanding chii is DMAA inofanira kunge iri chimwe chezvinhu izvo chero ripi zvaro rinoita kuti mutambi anotsigire aifanira kusimudzira asati asvika pasi kushandisa shanduro. DMAA iyo ndiyo mavara mapfupi emakemikari dimethylamylamine imishonga yaimbove inotendwa kuti yakabva kune geranium mafuta chaiyo. Zvisinei, kuburikidza nekutsvakurudza, zvakasimbiswa kuti 1, 3 dimethylamylamine inogadzirwa nemaoko mu laboratories.
Iyo inonziwo 1,3 DMAA, mishonga inoshandisa chimiro chakafanana nemishonga inonzi germanium inotorwa. Ichi ndicho chikonzero vanhu vazhinji vakafunga kuti DMAA yaivewo yekirasi imwechete yemishonga. DMAA kufambidzana kushandiswa izwi rinowirirana nevanhu vanoshandisa kuwedzera sezvavanonyanya kushandiswa neavo vanoda kutanga kutanga muviri nekugadzira zvikamu.
DMAA powder yakatanga kuunzwa mumusika naEli Lilly neKambani mu1944. Mushonga uyu wakawana kushandiswa kwakanyanya mukurapa sechirume chepamusoro. Iyo mishonga yakashandiswa nokuda kwechinangwa ichi sezvo yakawanikwa kuunza migumisiro yakafanana nekushandiswa kwe ephedrine uye pseudoephedrine.
Pakutanga, vanhu vazhinji vaidavira kuti DMAA yakabva kune rose rose geranium mafuta. Nokuda kwechikonzero ichocho, zvakajairika kuwana dzakawanda mafemu anogadzira DMAA kuwedzera kuratidza mifananidzo ye rose rose geranium michero yemiti yakadai semidzi uye tsvina. Zvisinei, pasinei nekutenda uku kwema kwenguva refu, maongorori ekuongorora DMAA akaratidza zvimwe.
Yakave yakaratidza kuti DMAA inogadzirwa nemaitiro mu laboratori uye haisi yepanyama sezvakambove yakatenda kwenguva refu. Mushure mokutaura kwaro kwekutanga kumusika, chirwere chacho chakanga chakatengeswa sevatambi vakakurudzirwa nemigumisiro yaro. Izvi zvakaitika kusvikira 1983 apo kuwedzera kwaibviswa pamusika.
Kuregererwa kwakakonzerwa nemashoko okuti yakanga isina kuchengeteka kutengeswa muma pharmacies ehurumende. Izvi zvakarambidza kuperevedza kwechirwere kunyange zvazvo kuchiri kutengeswa mumusika mutema. Kutengeswa kwevoruzhinji kweDMAA supplement kwakatanga zvakare mu2006 apo yaitengeserana pasi pezita idzva, Geranamine.
DMAA supplement haina kutengeswa chete. Pane kudaro, yaive yakabatanidzwa mukurema kurasikirwa kwekuwedzera uye yakarongerwa semutambo wemaitiro ekuvandudza mishonga. Kudzorerwazve kwechirwere mumakemikari evanhu vose kwakadana kukakavadzana kwakawanda pamusoro pekuchengetedzwa kwekushandisa kwayo kumutambo anosimudzira.
Zvinotambudza zvakave zvakanyanya kukanganisa kuti Zvokudya uye Drug Administration (FDA) zvinosvika pakukumbira vaiti vezvigadzirwa kuti varatidze kukodzera kwayo kushandiswa pasina kutyisa zvinotyisa. Nyika dzakadai seCanada dzakasimudzirawo kushushikana nezvechinangwa chayo, uye yakarambidzwa.
Izvo hazvo hazvo zvakachengeteka kuti zvishandiswe nevatambi vemakwikwi sezvinonzi 2010, uye World Anti-Doping Agency munguva pfupi yapfuura yakaronga iyo senhengo inokuvadza inorambidzwa kushandiswa. Nokudaro, mutambi anowanikwa ari kushandisa mushonga uyu unogona kunge wakarambidzwa kubatanidzwa mumakwikwi emakwikwi. Somugumisiro wepikisano yakabatana nekushandiswa kwayo, DMAA inorambidzwawo muuto reUnited States.
Iko kuwedzera kwave kuchichangobva kubviswa munzvimbo dzezvitoro zveuto kuti dzidzora kushandiswa kwayo. MuNew Zealand, kushandiswa kwechirwere hazvibvumirwi. Inotaridzirwawo kuti haisi pamutemo muUnited States ikozvino.
DMAA inoshandiswa chii?
Iyo chaiyo yekushanda nzira, DMAA haina kuonekwa. Zvisinei, mishonga inofungidzirwa kufanana nekuita kwechizvarwa adrenaline. Pazvishandiswa, DMAA inobata zvakananga hurumende yenheyo.
Mushonga unozivikanwa kuti unobereka kukurudzira kwakanyanya kunofanana nekushandiswa kwe caffeine. Zvisinei, mamiriro ekuita kweDMAA akasiyana neaya e caffeine. Kana yakatorwa, DMAA inokonzera kugadzirwa kwe noradrenaline iyo inonzi hormone inoshandiswa munguva dzekutambudzika kana kutya.
Iyo hormone inogadzirwa muzvinyorwa zvinonzi adrenal zvinowanika kumusoro kwepamusoro peitsvo. Paanosunungurwa, hormone inoparadzirwa muropa, uye izvi zvinokonzera kuwedzera kwemwoyo.
Kugadzirwa kwe noradrenaline kunokonzerawo kuti muviri utange kusunungura glucose kubva kune glycogen reserves. Izvi zvinotungamirira pakuvandudza simba rekuyerera mumuviri wemuviri, uye izvi ndizvo zvinowanzoitwa nevatambi vasati vaita basa. Kushandisa DMAA kuchaitawo kune humwe huri nani mune zvimwe zvinhu zvakadai sekuchenjerera, kukurudzira uye nguva yekuita.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikonzero nei DMAA inowanzoshandiswa nevatambi vasati vatanga sangano rekudzidzisa. Chirwere ichi chinopa manzwiro emasimba makuru kuita kuti mutambi wacho afunge kuita basa rinozoshandisa simba rakawandisa. Kushandiswa kweDMAA kwakachengetedza vatambi kubva pamusana wekunzwa kwemasimba anouya nechinhu chinowanzoshandiswa caffeine.
DMAA inovandudzika yekakineine, uye avo vanoishandisa kwenguva refu vanogona kutanga kukura. Izvi zvinoreva kuti kushandiswa kunodzora kunokosha. Kana yakashandiswa, inokonzera uropi kuita kuti unzwe kunzwa kwekuwedzera simba.
Kuwedzerwa kwepamusoro kweropa kunofambisa izvi. Somugumisiro weiyo nzira yekuita, vanhu vazhinji vanowanzoshandisa zvisina kunaka mushonga. Zvisinei, vamwe vatambi vanoshandisa mushonga wacho nechinangwa chinovaka pamitumbi yavo. Izvi zvinotevera zvimwe zvekushandisa zvakanaka kweDMAA:
1. Kupisa kwemafuta
Kazhinji, muviri unopisa mafuta akawanda. Zvisinei, izvi zvingave zvichiitika paanonoka zvishoma pane izvo zvinodiwa. Kuti kukurumidze kushandiswa kushandiswa kwezvokuwedzerwa kwave kwakagamuchirwa nekushanda kusimbisa vatambi. Kakawanda zvimwe zvezvidimbu zvinonzi steroids zvakadai Nootropics.
Kushandiswa kwezvokudya zvakadaro kunogadzirisa zvakakwana chiyero chekupisa. DMAA inoshanda seimwe inozivikanwa inowedzera mukupisa kwemafuta akawanda. Zvirongwa zvekushanda zvakawanda zvakagadzirirwa kuti zviwane migumisiro yakawanda, mukuru pakati pavo kuva kuderedzwa kwemafuta akawanda emuviri anopa mutumbi chisungo chisingadi.
Mafuta akawandisa anoisawo pangozi kuhupenyu hwemutambo sezvo mamiriro akadaro anogona kukonzera kuvharwa kwevhepa reropa. Apo izvi zvinenge zvichiitika, paizova nekuderera kuduku kwe okisijeni muropa uye mabasa ose evanhu angave akakanganiswa zvikuru. Iye zvino chiyi chekudzivisa mamiriro ezvinhu akadaro ndechokushandisa kwechirwere chakadai seDMAA inopa muviri wako nehuwandu hwemasimba.
Pane imwe simba, munhu anoshingaira kuita zvinhu zvinopedza simba, uye somugumisiro, kunenge kuderedzwa kwemafuta anokanganisa uye asina kufanira muviri. Chirwere chakawanikwa kuti chinoshanda kwazvo mukupisa kwemafuta emuviri , uye izvi zvakakosha kune vatambi vanoda kutsvaga izvi kunyanya panguva yekucheka kwechivi. Kubudirira kwechirwere kunenge kusingagumi.
Kana yakabatana neinosimudzira seyakadai se caffeine, DMAA inowanikwa kuvandudza mutumbi webasa rinenge huri ne 35%. Izvi, zvakare, zvinobatsira kuvandudza mafuta ekupisa moto nemazana makuru anokosha. Iyo mishonga inoshanda nekuvimbisa kuti inokonzera mafuta achipisa kare kare muviri usati waita kuti zviitike zvakasikwa.
Sezvo chiito cheDMAA chakanyatsobatanidzwa nehutachiona hwehutachiona, chirwere ichi chinovimbisa kuti chinokonzera chiito ichi nokukurumidza. Pakukurudzirwa, CNS inopindira nokuita kuti kushandiswa kweketani kunobvumira mafuta kupisa. Saka, zvingava zvakakodzera kuenzanisa chiito cheDMAA nemamwe mafuta ekupisa zvinowedzera mumusika.
Chinhu chinonyanya kukosha usati wadzidzira basa. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kutarisa izvo zvingangokupa izvi zvinyorwa zve simba kuti uende mberi. Mesomorph pre workout dmaa
Ndicho chinhu chekupa muviri kuvaka chikonzero chakakodzera chekutanga chaunoda kuita kuti workout yako ibudirire.
Sezvakanyorwa kare, mushonga unozivikanwa kuti unopa migumisiro yakafanana ne pseudoephedrine. Ichi chemishonga chichaita kuti muvhoti ave 'high' mode. Izvi zvinopa imwe nehombe huru yekuchengetedza iyo inofanirwa kudiridha.
Nokuda kwemigumisiro yakanakisisa, chirwere chinopa simba rakakwirira rinofanira kutorwa mushure mekuita basa rekudzidzira. Izvi zvichanyongedza mushandisi nemagetsi emagetsi izvo chete izvo vashandi vanosimudzira vanoshanda vanoita kuti mazuva avo atange kunyorwa pamusoro. Mishonga yakadaro inoita izvi kuburikidza nekukurudzira chimwe chezvinhu zvepanyama zvayo zvemuviri.
Paanenge apinda, mishonga inosimudzira vasodilation. Iyi ndiyo nzira inowanzoitika kana pane kuwedzera kupisa mumhepo. Muviri unopindira nekuwedzera ukuru hwemitsipa. Izvi zvinoreva kuunza ropa rakawanda kune ganda rekugadzirisa.
Zvizhinji zvinodhaka zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvine nitric oxide inokurudzira kuwedzera kwemidyo yeropa kuburikidza nehuwandu hwemhepo. Ichi chinhu chakawedzerwa kubatsira kune mutambi, kunyanya panguva pre-workout. Kana imwe huru, nzvimbo yekutakura ropa rinowedzera.
Izvi zvichapa mutambi wacho nechipo chekufamba kweropa risina kumbovapo kare kushandiswa kwechirwere. Nokudaro, kudzidziswa kwakasimba kunogoneka, uye mutambi ane masimba akawanda ekusimudzira musimba kukura.
Zvisinei, kushandiswa kweDMAA panyaya iyi kwawanikwa ichipesana nezvinotarisirwa nevanhu vazhinji pamusoro pekuita-kuwedzera zvinodhaka. Panzvimbo yekuvandudza vasodilation kufanana neine nitric oxide mishonga, DMAA inopesana. Icho chinokonzera vasoconstriction iyo inowanzova panguva dzakawanda apo kutsetseka mumhepo kunenge kwakaderera.
Panguva yakadaro, muviri unotamburira kuchengetedza ushu hwayo, uye izvi zvinokonzerwa nokuregera ropa kubva paganda. Izvi, zvisinei, zvinowanzoitika kana muyero wacho wakanyanyisa kumusoro uye haufaniri kuva kunetseka kune mumwe munhu anoronga kutora DMAA.
3. Inobatsira kugadziridza nguva shomanana yekuyeuka nekuita zvakajeka
Munhu wose aizoda kuyeuka zvose zvavanoda. Zvisinei, izvi hazviwanzo nyaya iyo upenyu hwevanhu hunosangana nezviitiko zvakawanda zvinoita kuti zvive zvakaoma kuti izvi zviitike. DMAA inogona kunge iri mubatsiri unobatsira pane izvi.
Zvidzidzo zvakaitwa nevashandisi vezvekuwedzera izvi zvakaratidza kuti avo vaibatanidzwa vaive nani zviri nani kudarika nguva isati yaishandisa. Nokudaro, kunyange zvazvo vanhu vakawanda vasingazotori chirwere ichi nechinangwa chekuzadzisa izvi, zvichauya sekuwedzera-kuitika kwekushandisa kwayo. Uye ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha izvo vanhu vakawanda vanokohwa kubva pakushandisa DMAA kunyange iwe iwe izvi zvichiitika kunze kwekugadzirira kwavo.
High reflex chiito ichowo chimiro chekuti vatambi vakawanda vangada kunzwa. Kushandisa DMAA kunoita kuti muviri uve wakangwarira, uye izvi zvinovandudza kushanda kwekuita. Izvi zvinoreva kuti vashandisi veDMAA vari kushanda zvikuru kunyanya panguva yekuvaka muviri kana mumakwikwi. Mushonga unoshanda kuburikidza nekuvandudza kuwanda kwemutumbi wemagetsi.
Izvi zvinokonzera kuti muviri uite kuti zviitike nekukurumidza kudarika kudarika. Izvi zvakaratidzwa mumuviri kuburikidza nokuva nemumwe munhu anoshanda uye akachenjera. Zvisinei, iyo chete inodzima pane iyi yakatarisana ndeyokuti kushandiswa kwemishonga mumakwikwi kunorambidzwa.
Nokudaro, kushandiswa kwaro kuvandudza chiito reflex munguva yevashandi hazvibvumirwi. Izvo zvinogona zvakadaro zvakadaro zvichiri kushandiswa nevatambi panguva yekusagadzikana kukwanisa kubvumira nekuvandudzika kwekukurumidza.
DMAA Inowedzera Zvokuchengetedza Here?
Izvi zvinofanira kunge zviri kunetseka kune ani zvake anobatanidzwa mumakwikwi emakwikwi. Iyo mishonga yakanyorwa pakati pezvinodhaka izvo zvisingachengeteka zvekushandiswa nesangano renyika doping. Mimwe mitumbi yakawanda yakarambidza kushandiswa kweDMAA mune mamwe masimba. Zvisinei, iyi ihurukuro yakakonzera zvakasiyana-siyana maonero.
Dare reUnited States 'Food and Drug Administration (FDA) rinofunga kuti DMAA zvinowedzera kusachengeteka kwevanhu. Iyo sangano rinotaura kuti hapana ruzivo pamusoro pekuita kweDMAA iyo inokodzera kuti ive mushonga wakachengeteka unoshandiswa. Pawebsite yebazi, muviri unopa vanhu zano rokuti vasapedza kushandisa zvinodhaka zvachose sezvo zvichikwanisa kuisa pangozi yehutano hwehutano.
Imwe yezvinonyanya kukosha zveDAA ndiyo kukwanisa kwechirwere kukonzera vasoconstriction. Izvi vanopopotedzana ndezvokufananidzira kwehuwandu hwehupfumi hwemvura hunogona kutungamirira kurufu kana husingatariswi nekukurumidza zvakakwana. Zvimwe zvikamu zvekuporesa zvinokonzerwa nekushandiswa kweDMAA zvinosanganisira matambudziko mukufema, kuora mwoyo uye kukanganisa kukuru kwekukundwa.
Maererano neCDA, kushandiswa kwechirwere kunogonawo kukonzera matambudziko ehutano sezvo inonyanya kushanda kuburikidza nekufurira hurumende yenheyo. Izvi zvinogona kuva nengozi sezvo zvinogona kukonzera kuora mwoyo pamwe nezvimwe zvinetso zvinouraya.
FDA yakanyatsogadzikana pakuvimbisa kuti DMAA ine zvigadzirwa zvekuwedzera zvinopedzwa kubva pamusika zvachose. Chinokosha pakati pezvikwiriso zvakasiyana-siyana zvavakaita ndezvekupa mabhizimisi emishonga nematsamba anovarambidza kubva kutengesa DMAA ine zvinyorwa. Kana zvikaitika kuti zviwane zvigadzirwa zvakadaro pamarashafuti, sangano rinokumbira vatengesi kuti vavaradze uye vasaita mamwe maitiro kubva kuvakadziri.
Kusvika ikozvino, makambani akawanda ave achibvumirana. Iyi mushandirapamwe yakatanga mu 2012, uye yakatora zvizere sezvo kune ikozvino kutengesa kuderera kweDMAA kuwedzera. Ikokowo pane dzimwe nyaya apo dzimwe makambani anoramba achibudisa DMAA kunyange pashure pokunge abvunzwa kuti amire neDAA.
Mhosva dzakadaro dzakapupurirwa mu2013 apo imwe nzvimbo yakadana USPLabs yakaramba kurega kugadzira zvigadzirwa. FDA yakamisa basa ravo, uye iyo yakagadziriswa mubvunzo yaifanira kuparadza zvigadzirwa zvakanga zvatova mumusika. Basa ravo rekutsvaga rekutengeserana raive rinenge $ 8 mamiriyoni.
Izvi zvinoratidzira kure kure iyo sangano rinoda kuenda kuve nechokwadi chokuti kugadzirwa kweDMAA kuwedzera kunogadziriswa kunomiswa uye kwete chero chirwere chimwe chete chinowanikwa nenzira inoenda kune vagari venyika. FDA yakatora danho rinowedzera uye yakanyora mazita akasiyana-siyana ayo vashandisi vangashandisa kudzivirira vatengi kuti vazive kuti vari kupedza DMAA. Izvi zvakaitika mushure mokunge sangano racho raona kuti makambani akawanda ari kubudisa mishonga mumazita akavanzika kuti vadzivirire vasazoona zvakananga mishonga inorambidzwa.
Mamwe emazita akasarudzwa anosanganisira Geranamine uye Methylhexanamine. Mamwe makambani anoratidza kuti kubhadhara kune zvinyorwa zveGeranium. Ichi chiratidzo chekuvapo kweDMAA. FDA inonyevera vatengi kuti vanyatsoziva nezvekuwedzera kwese kune zvinyorwa zveGeranium.
Iyo mitemo yakafanana mune dzimwe nyika dzakadai seKanada neNew Zealand nevamwe vakawanda munyika. Iko kunonyanya kunetseka pamusoro pezvose zvinokonzera pamhepo yekufema. Sangano repasi rinopesana nedoping rakanyorawo DMAA powder pakati pezvinodhaka izvo zvisingachengetedze nekushandiswa kwevanhu. Izvi zvinoreva kuti yakarambidzwa kuti ishandiswe nevatambi vanobatanidzwa mumakwikwi akadai seNyika yeNyika.
Izvo zvakadaro yakabvumirwa kushandiswa mune mamwe makwikwi zvikuru kunyanya mumadhoji maduku ari mukati memazinga anobvumirwa. Zvisinei, nguva dzose zvakanaka kuti uve nechokwadi pamusoro pemiganhu yemakwikwi iyo munhu anobatanidzwa asati atora mishonga kuti arege kupinda mumatambudziko.
Nyaya yekuti DMAA yakachengeteka yakatora rimwe rutsigiro mushure memhosva dzakasiyana-siyana pakati peDFA nedzimwe makambani. Makambani akaramba achisimudzira kuti pakange pasina kuipa pamusoro pekutengesa kuwedzera kwenyaya ye narcotic. Imwe tsvakurudzo yakabvuma kuti DMAA yakanga iri chibereko chekugadzira kweGeranium uye izvi zvaipikiswa neDDA.
Zvisinei, iyo sangano haina kupa chero humwe uchapupu hunotsigira huri shure kwezvakataurwa zvayo kuti mishonga iyi yakawanikwa zvakagadzirwa. Maererano nachiremba uyo akaongorora zvinyorwa zvekusava nekushandisa kushandiswa kwekuwedzera, hapana chakaipa chinogona kutarisirwa mumunhu akagara ane hutano akashandisa kubhadhara zvakakwana. Mishonga iyi yakataura kuti chiyero cheDMAA chakawanikwa mu-pre-workout supplement yakanga iri pasi pezvinofungidzirwa kuti inotyisa kushandiswa kwevanhu.
Mune imwe shanduro, vechidiki vakanga vari kushandisa DMAA sevanokurudzira panguva yemapato vakawanikwa kuti vawedzere chirwere chinowanikwa, chirwere cheperesi. Izvi zvakasimbisazve kudavira kweDAA pamusoro pekuchengetedzwa kwekushandisa DMAA muzvigadziridzo. Zvisinei, imwe tsvakurudzo yakabudisa uchapupu hweDAA huri kutsigira zvidimbu shure kwekuwanikwa kwave kuti vechidiki vari mubvunzo vakanga vashandisa kuwedzerwa kwakanyanya kwechirwere.
Zvakanga zvaratidzwa kuti vakatora mapiritsi ayo ega ega aiva neA600mg yezvinhu zvinoshanda. Izvi zvaive zvakakwirira sezviri mumamiriro ezvinhu chaiwo, uye mari inotarisirwa inenge yakapoteredza 60mg mune imwe piritsi yekuwedzera. Izvi zvinoreva kuti vaduku ava vakadya nguva gumi dzezvavaifanira kutora.
Muchidimbu, kubva mune zvezvesayenzi, pfungwa iyi inogona kuonekwa seyakachengetedzeka kushandiswa kwemishonga inenge yakachengetwa kana zviyero zvakakodzera zvemishonga inotorwa. Kana DMAA inotorwa mumasero epamusoro kupfuura 75mg, kune mikana yekukwira kweropa rega kune zvisingabviri, uye saka izvo zvinofanira kuonekwa. Mushonga unofanirwa kushandiswa chete nevanhu vasina kumbova nehuwandu hwekumanikidza kweropa munguva yakapfuura sezvo kushandiswa kwayo kunogona kukuvadza mamiriro acho ezvinhu.
Uyewo, kunyange zvazvo FDA isina kubvumirwa nemakambani mazhinji ari kubudisa chirwere ichi, vane nharo pamusoro pekuchengetedzwa kweDMAA kushandiswa. Saka hazvibvumirwi kutyisidzira zvido zvavo uye kuramba uchitsvaga kutenga zvinyorwa kubva mumusika. Kukurukurirana nachiremba usati washandiswa DMAA kusati kwashanda kwekushanda kunoda.
Izvi zvichaita kuti zvigadziriswa zvidikanwe zviwanikwe pasina kuvhara kuchengetedza hutano hwemushandisi.
Chii chaunoda kuziva musati watora DMAA supplements?
Pane zvinhu zvakawanda zvekuti kushanda kunoita mutambi kunofanirwa kuuya nekutarisana kusati kwagadzirisa DMAA sepamberi yekushanda kwemishonga inosarudzwa. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira migumisiro iyo munhu angangosangana nayo pamwe chete nezvikomborero zvauchakohwa kubva pakushandisa kwayo.
Kunyanya pakati pezvinhu zvaunoda kuziva ndezvokuti migumisiro yekushandisa izvi zvinodhaka zvakafanana nezvinogona kuitika pashure pokushandiswa kwecocaine uye methamphetamine. Izvi zvinoreva kuti mukana wekugadzirisa zvinodhaka ndewepamusoro sezvaunofananidzwa kumusoro pakati pezvinonyanya kuzivikanwa zvinokurudzira. Iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kunge uchizarura muviri wako kune imwe yezvinodhaka zvakasimba pane iwe uchiedza kuvandudza kushanda kwako.
Kuti udzivise mikana yekudhakwa, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti iwe unonyatsotevedzera izvo chiremba wako anotenda kuti zvakachengeteka kune utano hwako. Izvo zvakakoshawo kunzwisisa kuti kushandiswa kwechirwere ichi kuchaita kuti hurumende yepamusoro yenheyo ipinde zvakananga. DMAA inoshanda nenzira yakafanana nekaffeine nekuderedza kuwedzerwa kwekugamuchira kweCSS kuita kuti muviri wako uve wakangwarira.
Mishonga iyi yakasimba kudarika caffeine uye ichapa muviri wako simba rinoputika raunoda kuti utange sangano rako rekushanda pamushandi wepamusoro. Saka zvino zvakare zvakakosha kutarisa kuyerwa kwaunoita sezvo mishonga inopindira zvakananga imwe yenhengo dzakaoma zvikuru dzomuviri. Mune imwe nyaya yakataurwa muna 2012, boka revechidiki rakashandisa kushandisa chirwere ichi panguva yemutambo.
Vanodya kanopfuura gumi pane izvo zvinodiwa kuti zvive nenguva imwe chete. Chinangwa chacho chaiva chokuti 'kukwirira' nokukurumidza, uye izvi zvakashandurwa kuva kushandura kwavo. Mushonga wacho wakabata hutano hwavo hwepamusoro, uye vazhinji vakawanikwa vane chirwere cheperesi icho chirwere chisingaperi.
Vashandi vanofanirwawo kunzwisisa kuti kusiyana nemamwe akawanda ma-pre-workout anowedzera ane nitric oxide, DMAA inokonzera vasoconstriction yemashuini. Izvi zvinoreva kuti munhu anenge atora mapiritsi eDMAA achange achinaya mitsipa yeropa kupfuura mumwe asina. Izvi zvinogona kuuraya kana zvikaitika kumumwe munhu ane dambudziko rekurwirwa kwepamusoro kweropa sezvo zvichida kuwedzera kuoma kwechirwere.
Saka, munhu ane chirwere chepamusoro cheropa anofanira kurega kushandisa DMAA.
Kushandisa kwechirwere kunogona kukonzera kuwedzerwa kweropa uye kunzwa manzwi makuru. Kubatanidza kuwedzera pamwe nekuita zvinodhaka zvinodhaka zvinogona kuva nengozi sezvo izvi zvingaita kuti muviri wako uve nesimba guru rausingaiti. Zvinokurudzirwa kunzwisisa kuti DMAA inonyanya kushandiswa kwekutanga kwekushanda iyo isingafaniri kushandiswa kune zvimwe zvinangwa.
Vamwe vanhu vane kare kare vakashandisa sechinhu chinokurudzira zvepabonde, asi izvi hazvina kunaka. Iyo inogona kutungamirira kusvika pakuenda kune coma kana yakashandiswa zvisina kunaka uye izvi zvinofanira kugara zvichifungidzirwa panguva yekushandiswa.
DMAA pre workout uye pre workout side effects
Mushure mokudya kweDMAA, vamwe vanhu vakamboona kushanda kwepakuvadza kunokonzera kushushikana nekutuka. Izvi zvakajairika, uye zvinoreva kuti muviri wako unenge uchiita zvisina kunaka kumushonga. Zvisinei, kurutsira uye kushungurudzika hakungangodaro kunokonzerwa zvakananga nekushandiswa kweDMAA. Icho chemikemikari iri mune zvigadziridzo zvine zvimwe zvinokonzera, uye zvinogonawo kuva zvikonzero zvekurutsira.
Kunze kwekuti, mamwe maitiro ekutanga-workout anowanzoshandiswa nekushandiswa kwemashoko akadai seDMAA. Izvozvo zvinosanganisira:
Kuvhiringidza kurara maitiro
Zvizhinji zvinowedzera zvinouya nehuwandu hwevanhu avo vakasunungurwa kusashandisa, uye chinhu chikuru pakati pavo chinosanganisira vakadzi vanocheka pamwe chete nevaya vane pamuviri. Chikonzero chakakonzerwa neizvi ndechokuti, pane zvakaitika kune vakadzi vane pamuviri, kushandisa madhiragi kunogona kunge kwakakonzera kukura kwemwana asati aberekwa. Zvisinei, kunyange zvazvo ruzivo rwakanyanya rwuripo pamusoro pekushandiswa kwevakawanda kuwedzera kune mapoka evanhu, izvi hazvisizvo neDMAA pre-workout drugs.
Pano pane ruzivo rwakanyanya pamusoro peizvi. Nokudaro, avo vanofunga kushandisa DMAA sepamberi yekushanda kwemishonga uye vane pamuviri kana kuti vachiraira vanofanira kurega kuita saizvozvo sezvo pane zvishoma zvishoma pamusoro pemigumisiro inotarisirwa. Ichi chichava nzira yakachengeteka panzvimbo pokugadzirisa kushandiswa kwevashandi kune zvinetso zvavasina kumbofunga nezvazvo.
DMAA zvinodhaka zvinongororwa seinosimudzira. Izvi zvinoreva kuti zvinogona kunge zvakakanganisa kuvepo kwekuvhiyiwa kwakachengeteka kunyanya kana inotorwa vasati vasvika. Saka kuti usapinda mamiriro ezvinhu akadaro, zvinonzwisirwa kurega kushandisa iyo kana iwe wakagadzirirwa kushanda.
Zvinokurudzirwa kurega kutora chero chinhu chinokurudzira usati wavhiyiwa. Izvi ndezvekudzivirira kukwirira kweropa kunogona kuuraya panguva yekuvhiyiwa.
Ichi ndicho chinonyanya kuitika kune iyo inofanana nevanhu vanoshandisa DMAA. Ichi ndechokuti mishonga iyi inokurudzira uye mishonga yakawanda yeyikirasi inozivikanwa kuti inokonzera kukwirira kweropa zvikuru kunyanya kana kushungurudzwa. DMAA inotungamirira kukuderedza mishonga yeropa, uye izvi zvinokonzera kuti ropa riyerere nekukurumidza kudarika zvinowanzoitika zvichiita kuti ropa riwedzere.
Nokuda kweizvi, kushandiswa kweDMAA kwakawanikwa kunokonzera zvimwe zvirwere zvakaipa zvakadai seperebral stroke. Muchiitiko chechiratidzo ichi, mushandisi anofanira kurega kushandisa mushonga pakarepo. Ichi ndechokuti kushandiswa kwayo kusingaperi kunogona kuwedzera zviratidzo uye kunogona kutungamirira kurufu.
Zvisinei, zvinokonzerwa kudzivirira kukwirira kweropa kuburikidza nekudzora kushandiswa. Izvi zvichapa mhinduro dzakanakisisa kana ichitungamirirwa nemishonga iyo inotora miedzo kuti ione kuti chiyero chakakodzera chii.
DMAA inogara kwenguva yakadini mumutambo wako?
Nzira inowanikwa yakawanda yekutungamira kweDMAA inonzwika. Kana ichitorwa nenzira iyi, mushonga uyu unotora anenge maminitsi masere kuti upinde muropa remutengi. Zvisinei, migumisiro haichazonzwiki pakarepo sezvo madhiragi akawanda ane izvo zvinonzi hafu yehupenyu nguva. Iyi ndiyo nguva inotarisirwa kuti mishonga iparadzanise uye inosunungura zvinoshandiswa zvinoshandiswa mumuviri kushandiswa.
Iyo hafu yeupenyu hweDMAA inenge maawa 8. Nokudaro, munhu anenge achida kukurudzira muviri wake mushure mekuita basa rekushanda anofanira kutora mishonga yemishonga 8 asati apa nguva yakakwana yokuti mushonga wacho upinde mumuviri.
Mushure mokushandiswa kwechirwere, manzwiro evanhu vakawanda ekukwirira ane ruzivo. Kazhinji, iyi haisi manzwiro evanhu vakawanda vanoda kuzowana nguva yose kunyanya apo ivo vasiri kushanda kunze. Kune, saka, chikonzero chekuziva kuti nguva ipi inotorwa nemishonga inofanira kudzingwa kubva mumuviri mushure mekudya.
Pakati payo, mushonga unochengetwa mumuviri kwemazuva ane 24-awa mushure mokunge manzwiro asisati awana.
Makomborero eDMAA yeFat Burning
Zvichida, iwe wakanzwa nhema dzakawanda uye chokwadi pamusoro pekugona kweDMAA mukurasikirwa kwekurema uye iwe unoda kuziva kuti ndeupi kwavari inonzwisisika. Zvakanaka, iyo nyaya yacho ndeyokuti DMAA inowedzera zvinogona kukubatsira kuti ureke huwandu hunorema huri munzira dzakasiyana-siyana.
Chokutanga, kuwedzera kweDemethylamylamine kunogona kukubatsira kuti uwedzere kuisa pfungwa uye zvinokurudzira kusvika pakuwedzera kwako kushivirira kunorwadziwa nesimba. Iko kuwedzerwa simba uye kushungurudzika kunorwadza kuchakubatsira iwe kuti uite zvakasimba kurasika kurasikirwa kurairirwa kubudirira.
Kana zvasvika pakupisa kwemafuta, 1 3 Dimethylamylamine ndeimwe yepamusoro yakanyanya kupisa mafuta anouraya. Kungofanana nehuwandu hwemafuta anoremekedzwa anopisa zvinowedzera, DMAA inokonzera kupisa kwemafuta nokukurumidza kudarika nguva inowanikwa mune imwe nyaya umo kupisa kwemafuta kunenge kusingaitike kuitika.
Uri kushamisika here? chii chinoita dmaa kupisa mafuta mumuviri wako?
Zvakanaka, DMAA inowedzera simba rako kuburikidza nevasoconstriction, chirongwa chinosanganisira kudziviswa kwekuyerera kweropa rako. Kuvharirwa kweropa kunokonzera musimba kukura pamwe nemasisita kukurudzira. Mune zvimwe zvakadaro, mararamiro ako emasabolism anowedzera, zvichiita kuti kukurumidza uye kupfurikidza kupisa mafuta emuviri.
Izvo zvivako zveDMAA, ephedrine uye amphetamines zvinowanidza zvakawanda zvakafanana. Mune zvakadai, DMAA inogona kukurudzira hutano hwehutano hwomunhu, huchiita kuti uropi hubudise norepinephrine. Uyewo, inoita kuti muviri wea alpha uye beta receptors iwedzere noradrenaline basa, zvichidaro zvichiita kuti adrenergic receptor system isanzwisisike.
Kusanganiswa kwezviito zvose zvinotungamirira kukuwedzera mumuviri wehutachiona hwemuviri pamwe chete nekuparara kwemafuta kubva pachimiro chechidimbu kunobereka simba - izvi zvinonzi lipolysis.
Mhedzisiro yeDMAA inogona kuwedzera zvakanyanya kana inoshandiswa pamwe chete nezvimwe zvinogutsa zvinokonzera caffeine.
Kana yakashandiswa pamwe chete ne caffeine, zvinoitika zveDMAA pamutengo wemagetsi zvinowedzera ne35% apo mafuta anokonzera kushanda anowedzera kupfuura anopfuura 169%.
Mukuongorora kwakachangobva kuitwa kuongororwa kubudirira kweDMAA mukupisa kwemafuta, vanhu vakuru vane hutano hwe32 vainge vashandisa rimwe capsule yekubatsira kwayo zuva rega rega kwezuva re14 rakawana kurasikirwa kukuru kwemafuta.
Kungofanana nedzimwe mimwe mishonga, DMAA inogona kuva nemamwe madambudziko kana ichishungurudzwa. Heano zvimwe zvezvingaita DMAA madhara:
1. Cerebral haemorrhage
Kunyange zvazvo pasina humwe humwe hunobatanidza DMAA zvakananga kushaya hutachiona hwehutachiona, kune imwe nyaya yakataurwa yemunhu akavaka chirwere ichi mushure mekutora doro rinodhaka uye DMAA mix. Zvisinei, zvakakosha kuziva kuti DMAA haifaniri kushandiswa pamwe nedoro zvisina kudaro zvimwe zvakashata zvingave zvichiitika.
2. Kuipa kwechiropa
Basa guru rechiropa nderokunyanya ropa reropa rekudya musati raita kuti ripfuure kune dzimwe nhengo dzomuviri. Kunze kweizvozvo, chiropa chinoshandisa mishonga yemishonga uye chinoderedzawo makemikari.
Paunotora DMAA mapiritsi kana kuwedzera, chiropa chinofanira kutarisana nemishonga yemishonga / kuwedzera. Somugumisiro, chiropa chinogona kuve ne-enzyme build-up iyo inogona kuguma kuva inotyisa. Mushonga wacho unogonawo kukonzera kuora kwechiropa kunogona nekuguma kwekuguma kwekugara kwechiropa kukuvadza kana kupora.
Tichifunga kuti iyo inokurudzira, Dimethylamylamine inogona kuwedzera kuwedzera kweropa. Mune zvakadaro, vanhu vanotambura nehuwandu hwehutano hwemhepo havafanire kutora mishonga kana zvimwe zvinowedzera zviripo.
4. Kukanganiswa kwemoyo (mwoyo arrhythmia)
Kunyangwe zvisingawanzoitiki, simba rinokurudzira reDMAA rinogona kutungamirira kukurumidza kwemoyo uye izvi zvinogona kukuvadza mwoyo arrhythmias kuvanhu vanotambura nemamiriro acho ezvinhu. Nokudaro, kana iwe wakarongerwa kurapwa, iwe unorayirwa kuti usatora DMAA mavhiki maviri musati wasvika musi wekushanda, zvisati zvaitika, kuwedzerwa kukwirira kweropa uye kusagadzikana kwepfungwa nekuda kwemigumisiro yemishonga kunogona kukanganisa kushandiswa kwekuvhiya.
Mune chidzidzo chakaitwa kuti chiongorore migumisiro yeDMAA, zvakawanikwa zvakaratidza kuti 12 vanhu vakuru vane utano mumwe nomumwe wavo akanga apedza makirosi maviri eOxyELITE Pro, kuwedzera kwezvokudya zvine Demethylamylamine, yakawedzera kuwanda kwemwoyo pamwe nekusimudzirwa kweropa.
Kunyange zvakadaro, vanhu vasere vane utano hwakanaka vakatora chirongwa che 25 mg yeDMAA chaive nechirwere chemwoyo chaiye uye kuwedzerwa kweropa kunyange mushure mekutora mishonga. Izvi zvinoratidza kuti mishonga haina chaanoita pamutambo wemwoyo kana kuwedzerwa kweropa kana ichidyiwa mumwero wakadaro.
5. Kuwedzera kweGlaucoma
Kunze kwekuva nemigumisiro inokurudzira, Dimethylamylamine inokonzera kukanganisa kwemitsipa yeropa. Kubatanidzwa kwemigumisiro miviri kunogona kukonzera kukura kwemamwe marudzi e glaucoma. Saka, zvinokurudzirwa kuti usarega kutora mishonga kana iwe une glaucoma.
6. Chiropa Damage
Ikoko kwakambotaurwawo nezvehutachiona hwekuvadzwa kwechiropa semugumisiro weDMAA kushandiswa. Makore mashanu apfuura, vanhu 36 vakanga vatora OxyELITE Pro, zvokudya zvinowedzera pamwe neDMAA sechinhu chinosanganisa, vakaongororwa vane utachiona hwakakuvara. Mumwe wevarwere akafa apo vamwe vaviri vakakwanisa kupona mushure mekuvhara chiropa.
Zvakakosha kuziva kuti vese varwere ve36 vari kutora chirongwa chekurudziro chekuwedzera asi 27 yavo yaitora DMAA-pasina shanduro yekuwedzera. Nokudaro, hazvisi nyore kutanga chirongwa chinosvibisa muwedzera.
7. Bhoeding Bleeding
Kushandiswa kweDMAA kwakabatanidzwawo muuropi kubuda ropa. Kutaura zvazviri, zvitatu zvevanhu vakave nekuropa kweuropi mushure mekushandisa DMAA zvakataurwa. Kunyange zvakadaro, zvakasimbiswa kuti avo vakaurayiwa vakanga vashandisa zvinodhaka newaini kana caffeine nguva dzose.
Mune imwe yezviitiko, munhu ane hutano akatora chirongwa chakakurudzirwa chekuwedzera kwezvokudya zvine Detethylamylamine uye shure kweizvozvo, akatanga kutora musoro wakakomba wakateverwa neuropi kubuda ropa.
8. Kumira kurova kwemoyo
Kune imwe nyaya yakarondedzerwa yemurume ane hutano anonzi 22 ane makore ane makore makumi matatu.
9. Nausea uye Kuedza
Chimwe chekuongorora kuongorora migumisiro yechirwere cheDMAA chakaratidza kuti 15% yevanhu va56 vakange vatora zvizere zvinowedzera zvinodhaka (OxyElite Pro) vakatsvaga uye vane ruzivo rwekushungurudza mushure mekutora zvigadzirwa. Zvisinei, kwakanga kusina uchapupu hwakaratidza kana iri DMAA mune zvekuwedzera izvo zvakakonzera kushungurudza uye kurutsira kana zvimwe zvigadzirwa zvaive zvine mhosva.
10. Temporary weak
Nzira yakanyanya kufanana nayo inoshandiswa nekushandiswa kweDMAA inoratidzika kurasikirwa kwesimba ('crash') kwemaawa mashomanana mushure mekutora mishonga. Zvisinei, havasi vose vanoshandisa zvinodhaka izvo zvinogumira.
Zvimwe zvinokonzerwa nemigumisiro yeDMAA inosanganisira:
Vakafa (kunyange zvisingawanzoitiki)
Icho chimwe chezvinhu zvinokonzerwa nemigumisiro yeDMAA. Kunyange zvakadaro, hapana zviongorori izvo zvinongorongedza migumisiro yechirwere. Ruzhinji rwekutsvaga nezvemishonga yemishonga inosanganisira kuwedzera kwezvokudya pamwe neDMAA seimwe yezvivako zvavo panzvimbo yezvinodhaka mune zvega. Tichifunga kuti iyo chaiyo yezvinodhaka muzvinowedzera hazvisati yasimbiswa, hapana kunyatsoona mukuguma kwekuti migumisiro yechirwere inokonzerwa neDMAA. Zvimwe zvinoshandiswa muzvinyorwa zvinogona kuva chikonzero chemigumisiro yakaipa.
Kunze kwekudaro, pane dzimwe nguva, migumisiro yakaipa inokonzerwa nekudhura kweDMAA-based products. Vamwe vevashandi vakaona mararamiro aya vakaudzwa kuti vakatora kusvika ku 1,000 mg zuva rega rega. Mumamiriro ezvinhu akadaro, migumisiro inogona kudzivirirwa kana munhu akanamatira kune yakakodzera dhiyo yega. Tichataura pamusoro pekodzero yeDMAA mukanguva.
Kunze kwekuti, 1, 3 Dimethylamylamine yakawanikwa iine simba zvikuru pamutambo wepamusoro wemagetsi kana yakashandiswa pamwe neCN stimulants kana neototropic dzinobata zvirongwa zveadrenergic. Izvi zvingaguma nemigumisiro yakasiyana-siyana. Saka, kana iwe uchida kudzivisa migumisiro, iva nechokwadi chokuti haunosanganisi DMAA nevanokurudzira kana nootropic.
Uyezve, zvinokurudzirwa kuti DMAA inowedzera zvigadzirwa haifaniri kushandiswa zuva rega rega. Saka, chii chinonzi Dimethylamylamine cheji?
Izvozvo zvinonzi dimethylamylamine dose inobva pane zvakasiyana-siyana zvakadai sezera uye hutano hwemushandisi, pakati pemamwe mamiriro ezvinhu. Zvisinei, ikozvino, hapana zvoga zvezvesayenzi zvinogona kuvimbwa pakugadzira dhiyo yakakodzera yemishonga.
Kana ukatenga chigadzirwa cheDMAA chemafuta / kurasikirwa, ita kuti iwe uverenge uye uite mirayiridzo yekushandiswa pane iyo mazita uye uone chiremba wako, mhizimisi kana imwe nyanzvi yezvehutano inokudzwa usati waishandisa.
Kazhinji, chiyero chekutanga cheDMAA chakasiyana kubva ku 10 mg kusvika ku20mg. Kana kuti ½ kushanda kweDMAA-inosanganisira chigadzirwa chaunosarudza. Izvi zvichakubatsira kuti uone uye unzwe kuti mushonga uyu unogona sei kukukanganisa iwe kana ukautora muzere wakakwana.
Sezvo nguva inofamba, iwe unogona kuwedzera dhiyo ku 40 kana 60 mg pazuva. Zvisinei, hapana humwe uchapupu hwechokwadi hunotsigira mazamu akaenzana.
Izvo zvinoratidzika seyero yakaenzana yezvibereko zvine dimethylamylamine. Izvo zvinokonzerwa nemashandisirwo ekushandiswa anopiwa nevakagadziri veDMAA vanowedzera zvino pamusika.
Iwe haufaniri kushandisa chirairo cheDMAA zuva rega rega kana uchida kusvika kubudirira. Ruzhinji rweDMAA rinowedzera hunovapa kaviri kusvika katatu pavhiki panguva yakawanda. Nokushandisa zviyero zvakadai panguva yakawanda, iwe unonyatsogadzirisa kuchengetedza kuve nekuvimbika pane zvigadzirwa.
Zvichida, shandisa mapiritsi eDMAA apo unoda simba kana kuwedzera kukurudzira kana anenge maminitsi e30 usati wapinda mune zvekuita muviri. Nokuita saizvozvo, iwe uchakwanisa kudzivisa zvimwe pre workout supplement side effects.
IWorld Top 4 Yakanakisisa-Kutengesa Fat Zvinodhaka Zvinodhaka
Kune mishonga yakasiyana-siyana inobatsira kurasikirwa kwemafuta kuburikidza nekuderedza kushuva, kuwedzera muviri wemetabolism uye / kana kuchengetedza chido chakanaka. Mafuta anosvuta zvinodhaka zvinogonawo kuita kuti munhu awedzere kushanda kwekuita basa nekuwedzera simba rake nekuisa pfungwa.
Itafura inotevera inoratidza hutatu hwekutengesa mafuta zvinodhaka zvinodhaka pasi rose.
Zita remishonga uye Nhamba yeCAS Mashandiro
Synephrine powder -CAS: 94-07-5 Synephrine powder iseta-agonist inoshanda kuburikidza nekuwedzera muviri wemuviri wehuwandu hwemagetsi, kushandisa koriori uye masimba
1,3-dimethylamylamine (DMAA powder) - CAS 13803-74-2 Nechimiro chemakemikari yakafanana neyeEfdrine, 1,3-dimethylamylamine inogadzirwa neural stimulant inoshandiswa sechinhu chinonyanya kukosha muzvokudya zvinovaka muviri kubatsira mukuvandudzika kwemitambo uye kuwedzera simba.
Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Kunze kwekuva nesimba rakasimba rinopisa mafuta, Clenbuterol hydrochloride inewo yakataurirwa thermogenic effect nekuwedzerwa ropa nekusimudzira mwoyo kushanda zvakaoma.
Kunze kweizvozvo, inokonzera glycogen kuputsika, saka kupisa kwemafuta emuviri.
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 salbuterol powder yakatanga kushandiswa nevanhu vane astmma kana chronic obstructive chirwere chemapemmoni kuti uwedzere kufema kwavo. Zvisinei, nhasi, chirwere ichi chinonyanya kushandiswa kukurudzira kurasikirwa kwemafuta nokukurumidza, nokuda kwemisikiti yekugadzirisa panguva yekurasikirwa kwehutano hwemafuta pamwe nekusimudzira kutsungirira apo mumwe ari kuita kurasikirwa kwemafuta.
Kana iwe uchida kutenga dmaa kana chero ipi zvayo pamusoro pemafuta zvinopisa zvinodhaka, iwe unogona kungoita izvo zvinotambudza-pasina AASraw, com.
1, 3-dimethylamylamine inopa zvikomborero zvakawanda kusanganisira kubatsira mukuvandudzika kwenguva pfupi yekuyeuka uye kugadzirisa mafambiro pamwe chete nekuvaka muviri uye kupisa mafuta emuviri. Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti iwe unobvunza mumwe munhu anoremekedzwa wehutano wehutano uye anoteerera kudii yekusimudzirwa kuti urege kudzikisa migumisiro yakadai sekukwirira kweropa, kushaya mwoyo uye kuora kwepfungwa, pakati pezvimwe zvirwere zvehutano zvakabatana.
Kunyange zvakadaro, kuomerera kune chiyero chakanaka haisi chivimbo chokuti hauzovi nemigumisiro yakaipa. Uyezve, zvakakosha kuziva kuti hakuna uchapupu hwezvesayenzi hunobatanidza izvi zvakananga kushandiswa kweDMAA chete; ndiko kuti, pakusina kwevamwe kubatsiridza zvigadzirwa.
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - Kuchengetedzwa kwekodhi ye caffeine uye 1,3-dimethylamylamine kuwedzera muvarume vane hutano - Hum Exp Toxicol. 2013 Nov; 32 (11): 1126-36. doi: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Feb 19.
Schilling BK (1), Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR. - Physiological uye pharmacokinetic migumisiro yemuromo 1,3-dimethylamylamine inotungamirirwa nevarume - BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oct 4; 14: 52. doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, yakabudiswa musi wa 24 April 2014, yakagadziridzwa musi wa 14 June 2018,
Vorce SP, et al. Dimethylamylamine: mishonga inokonzera mafungiro ekudzivirira mafungiro emamfetamines. J Anal Toxicol. (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. Imwe piritsi inorwadza: mhaka yekutsvaga kubva kuDMAA mapiritsi epati. NZ Med J. (2010)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (Book).
Lisi A, et al. Zvidzidzo zve methylhexaneamine mune zvekuwedzera uyegerger mafuta. Drug Test Test. (2011)
Bloomer RJ, et al. Migumisiro ye1,3-dimethylamylamine uye caffeine yega kana kuti yakasanganiswa pamwoyo uye kuwedzerwa kweropa mune varume nevakadzi vane hutano. Phys Sportsmed. (2011)
DECA powder-Mazano Ekupedzisira Nzira Yokuita Nandrolone Decanoate (Durabolin)
MAGL inhibitor uye FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750
Kuongorora kwakadzika kwe Testosterone Cypionate The Top 10 testosterone ester: Ndeipi yakakodzera kwauri?